Ururka Midnimo oo Farriin Talo ah u Diray Xisbiyada iyo Xukuumadda Somaliland | Aftahan News
Ururka Midnimo oo Farriin Talo ah u Diray Xisbiyada iyo Xukuumadda Somaliland
Hargeysa (Aftahannews)-Ururka Midnimo Somaliland, ayaa xisbiyadda iyo xukuumadda tallo ku siiyey in loo tannaasulo qarannimadda iyo wadda-jirka shacabka Somaliland. Islamarkaanna aynnu indha caalamka ku soo jiidanay nabadda aynnu 30-ka sanno ku naaloonaynay, waxaannan asxaabta iyo xukuumadda uu gadhwaddeenka ka yahay Madaxweyne Muuse Biixi u soo jeedinaynaa in is-afgarad iyo isu-tannaasul lagu dhameeyo khilaafka doorashooyinka ee muddadda soo jiitamayay.
Bayaanka uu ururka Midnimadda Somaliland, wuxuu dhignaa sidan:
Ururka Midnimo Somaliland waxa uu halkan baaq tallo soo jeedin ah uga dirayaa dhammaan axsaabta qaranka ee saddexda xisbi qaran gaar ahaan Gudoomiyeyaasha iyo Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland, Mudane Muuse Biixi Cabdi.
Sida aynu la wada socono Jamhuuriyadda Somaliland waxa ay caan ku tahay oo lagu majeertaa saddex qodob oo aas aas ama bud-dhig u ah in aynu soo jiidano indhaha beesha caalamka Somalilandna ku caano maashay mudadaa 30kan sanno ku dhaw, qodobadaas oo kala ah
Nabadgelyada ka hana qaaday Somaliland oo ah mid ku fiday mandaqada geeska Afrika caalamkuna tusaale u soo qaato marka uu ka hadlayo amniga afrika.
Isu-tanaasulka iyo maqalka ka jira Somaliland oo ah mid aynu ku nabad iyo caanno maalnay dalal caalamka ee horumarayna aynu kaga horayno in aynu waxeena ku dhamaysano dhib la’aan iyo wada tashi
Hannaanka Doorashooyinka dalka oo ah ilaa imika mid aan lagu arag laguna maqal guud ahaan Afrika iyo inta badan caalamka, taas oo soo jiidatay adduunyada kale, ahna mid ka hanna qaaday Somaliland.